ဟာသစုစည်းမှု (၂၀-၃) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 11:01 PM | No မှတ်ချက် |
‪#‎ကောင်မလေး‬- ငါပထမ ရည်စားက ခေါက်ဆွဲဆိုင်ဖွင်.တာ....သူနဲ.ပြတ်သွားတော. ငါ.ခေါက်ဆွဲ လုံးဝမစားတော.ဘူး
ငါ.ဒုတိယ ရည်စားက အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင်.တာ ..သူနဲ.ပြတ်သွားတော. ငါ အင်တာနက် လုံးဝမသုံးတော.ဘူး။
(တတိယရည်စား) ကောင်လေး- ဒါဆိုရင် သေချာတယ် နင်.ငါနဲ. လမ်းခွဲလို.မရတော.ဘူး...
ကောင်မလေး - ငင်
#‎ကောင်မလေးတွေ‬ အချင်းချင်း ဒါမျိုး လက်ဆောင်တွေ ပေးလေ.ရှိတယ်။ မုန်.၊ ကလစ်၊ ရေမွေး၊ ပန်း၊ မိတ်ကပ်
“ဟေ.ယောင်....သားကြီး မင်းကို ခင်လို.ပေးတာနော်.... ရော. ဟို.ကောင်မလေး ဖုန်းနံပါတ်......ငါ.နာမည် လုံးဝထုတ်မသုံးနဲ. ......ကြားလား....။။
#‎ဖေ‬.ဘုတ်မှာ စော်အလန်းလေးတစ်ဗွေ နဲ.ချက်နေရင်း နဲ.“မအလ” “နမဆပ” လို.ရေးလိုက်မိတယ်.......။
အမှန်က “မအားလို. နောက်မှဆက်ပြောလို.” အတိုကောက်ရေးလိုက်တာကို ငါ.ကို Block သွားတယ်.......။
#‎ကောင်လေးတွေ‬နဲ.ကောင်မလေးတွေ ရှော.ပင်းစင်တာမှာ ဈေးဝယ်ထွက်ရင် ကောင်လေးတွေက
ကောင်မလေးတွေ လက်ကို မြဲမြဲ ကိုင်ထားတာ မြင်ဖူးကြမှာပါ...။
ဘာလို. အဲလို. ကိုင်ထားရသလဲဆိုတော. .................
လက်ကိုလွတ်ရင် ဟိုဟာဝယ် ဒီဟာဝယ် လုပ်တတ်လွန်းတဲ.ဒဏ်ကို မခံနိုင် လို.ပေါ.ဗျာ....
ရုတ်တရက်ကြည်.လိုက်ရင် Romantic ဆန်ပေးမဲ. တစ်ကယ်တမ်းကျတော. Economic ပါဘဲဗျာ.......။။။
#‎ယောကျာင်္းလေး‬ များကို အဘယ်ကြောင်. “ဘဲ” ဟူသော နာမ်စား သုံးပါသနည်း?
၀င်္က၀ုတိ သုံးပြီး ဖော်ပြရလျှင် မူ တွဲလောင်းကျ လှုပ်ခါနေသော အရာပါရှိသူ ဟု တိုက်ရိုက် မသုံးဘဲ ထိုအရာနှင်. သဘောတရားချင်းတူသည်. (ဂလိုင်၊ခေါင်းလောင်း) Bellဘဲလ် ဟူသော အင်္ဂလိပ် အသံကိုမြန်မာမှုပြု ပြီးဘဲ ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တခါက ရွာတရွာ မှာ မိသားစု (အဖေ၊အမေ၊ သားကြီး လင်မယားနှင်.သားငယ်)တို. ရှိကြတယ်တဲ.။ တနေ.မှာ စစ်တပ်က စစ်မှုထမ်းရန် တစ်အိမ်တယောက်ခေါ်တော. သားကြီးက လည်းကျတော် အိမ်ထောင်ကျတာ မကြာသေးလို. စစ်မှုမထမ်းချင်ဘူးလို. ပြောတယ်။ သားငယ်ကလည်း ကျတော်ကတော. လယ်ထွန်စရာရှိသေးလို. စစ်မှုမထမ်းချင်ဘူးလို. ငြင်းတော. အဖေဖြစ်သူက အသက်၆၀ကျော် အရွယ် အိုကြီးအိုမ နဲ. စစ်ထဲ ၀င်သွားတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာလည်း သူက အသက်ကြီးတော. ခေါင်းဆောင်ခန်.ထားပေးတယ်တဲ.ဗျာ.....
တနေ. စစ်တပ်က ခွင်.ရလို. ယူနီဖောင်းအပြည်.အစုံ နဲ. အိမ်ပြန်လာတော. အိမ်ရှေ.မှာ သူချွေးမက ကုန်းကုန်ကွကွ နဲ. အလုပ် လုပ်နေတာကို မြင်တော. သူလည်း စိတ်မထိန်းနိုင် ဘဲ သူချွေးမရဲ. တင်ပါးကို သွားကိုင်သတဲ.ဗျာ... အဲ....ပြီးတော. မှ....ချက်ချင်း အသိဝင်လာပြီး သူချွေးမကို တောင်းပန်ပြီးတော. တစ်ခွန်းဘဲ ပြောလိုက်တာက “ ငါ အဲဒါကြောင်. ယူနီဖောင်းမ၀တ်ချင်တာ ” ယူနီဖောင်းဝတ်တော. စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးလို. ပြောသတဲ.ဗျာ.......။။
မှ- သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ ပြောပြလို. ပါခင်ဗျာ....။